सुदूरपश्चिममा थप ५७ जनामा कोरोना देखियो, कुन जिल्ला र कहाँ कति ? — onlinedabali.com
सुदूरपश्चिममा थप ५७ जनामा कोरोना देखियो, कुन जिल्ला र कहाँ कति ?
काठमान्डौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमामा आज थप ५७ जनामा कोरोना देखिएको छ । योसँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच हजार ४ सय ६३ पुगेको छ।
डडेल्धुरा अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज इश्वरीप्रसाद भूषालका अनुसार कैलालीमा घोडाघोडी नगरपालिकाका ३१ जना, टीकापुर नगरपालिकाका ८ जना, गौरीगंगा नगरपालिकाका ७ जना र जानकी गाउँपालिकाका १ जना गरी ४७ जना छन् ।
यसैगरी भीमदत्त नगरपालिकाका ८ जना, महाकाली नगरपालिकाका १ जना गरी कञ्चनपुरमा ९ जना छन् । आजै बैतडीको नेपाली सेना गणका १ जनामा कोरोना पुष्टि भएको बताए ।
डडेल्धुरा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण भएकोमा ५७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
यसैबिच आजै रुकुम पश्चिममा थप ९ जना कोरोना सक्रमित भेटिएको छन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा थप ९ जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन ईश्वर रावलले जानकारी दिए । यस अघि एक सरकारी कार्यालयका प्रमुख बाँकेको नेपालगञ्जबाट रुकुम पश्चिम गएका ती कार्यालय प्रमुखको पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो ।
साउन २८ गते प्रमुखमा कोरोना देखिएको त्यसपछि उनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा थप ९ जना कर्मचारीमा आज कोरोना संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन ईश्वर रावलले जानकारी दिए ।
कोरोना फोकल पर्सन रावलका अनुसार आज मात्र रुकुम पश्चिममा मात्रै १८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये १० जना सरकारकी कार्यालयका कर्मचारी, तीन जना सुरक्षाकर्मी, दुई जना भारतबाट आएका र तीन जना सानीभेरी गाउँपालिकाका वासिन्दा रहेको छन् ।
पछिल्लो समय रुकुममा संक्रमितको संख्या बढेपछि मुसिकोट नगरपालिकामा संक्रमित व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । । एकै पटक १८ जना संक्रमित थपिएपछि उनीहरुलाई अस्पतालको तालिम हलमा राखिएको छ । ६ बेडको आइसोलेसन रहेको जिल्ला अस्पतालमा ९ जना राखिएको छ । जिल्ला अस्पताल बाहेक अन्य ठाउँमा आइसोलेसन नभएको पनि कोरोना फोकल पर्सन रावलले बताए ।